Misy bolongamben-dranomandry amin'ny habeny samihafa ao amin'ny rano manodidina an'i Groenland. Misy fotoana ireo bolongan-dranomandry kelikely mizotra any amin'ny lalana fray, ary lalana fray hafa no izoran'ireo hafa izay lehibebe kokoa. Ny rivotra mitsoka no mitondra ireo kely kokoa; ny hery tosiky ny ranomasina kosa no mitondra ireo bolongan-dranomandry lehibe. Rehefa mieritreritra momba ny fisandratana sy ny fahalavoan'ireo firenena maro teo amin'ny tantara isika dia mitovy amin'ireo rivotra mitsoka eo amin'ny ranomasina sy ny hery tosiky ny ranomasina izany. Sary an'ohatra maneho ny herin'ny olombelona sy ny zava-drehetra izay miova ny rivotra; ny hery tosiky ny ranomasina kosa dia maneho ny fahefan'Andriamanitra. Maneho amintsika izany fa miasa eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelonaAndriamanitra. Izao no nambaran'i EGW: "Nefa tahaka ireo kintana mihodinkodina eo amin'ny lalana midadasika nofaritana ho azy, dia tsy mirotoroto na mitaredretra ny fikasan'Andriamanitra" - IFM, t. 25.
Miakatra eo amin'ny fahefana ny fanjakana, kanefa mianjera avy eo. Toy ny hoe miseho noho ny herin'ny olombelona ny fijery izany, kanefa asehon'ny Dan. 2 amintsika fa Andriamanitra no mifehy ny tantaran'ny olombelona. Izy no mitantana izany hatrarnin'ny fiafarany.